Apricot akuku na-elekọta | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Apricot akuku na-elekọta
Apricot akuku ma na-elekọta - ọrụ okpomọkụ na-esi ísì ụtọ
Ọ gaghị ekwe omume ịchọta ndị na-adịghị eri ma ghara ịchọrọ mkpụrụ apricot. Nke a bụ nkpuru dị ezigbo ụtọ nke na-eweta ọṅụ na uru ahụike. Iji nweta mkpụrụ osisi apricot n'ubi gị na-enye onwe gị mkpụrụ osisi dị ezigbo ụtọ n'oge okpomọkụ, jam pụrụ iche, compotes na jam maka oyi ruo ogologo oge.
Apricot: oke nke oyi-hardy iche maka mpaghara Moscow
A na-ewere ya na aprịkọt bụ omenala ndịda. Otú ọ dị, ndị na-elekọta ugbo achọpụtawo ụzọ isi too osisi a mara mma n'ebe dị jụụ. Ógbè Moscow - mpaghara ahụ dị ezigbo oyi, mmiri frosts ebe a pụkwara iru -30 Celsius C. N'ihi ọnọdụ ihu igwe dị otú ahụ, ụdị apricots kasị mma maka mpaghara Moscow ga-abụ oyi-ụdị nke apricots.
Apricot "Black Prince" anaghị ama ndị ọgbọ ubi, ma na-enweta ngwa ngwa. Ọdịiche - a ngwakọ nke apricot, udara piom na piom, dị ka breeders, ọ pụtara dị ka a n'ihi nke random pollination nke apricot udara piom. N'ikpeazụ, ọ dịtụ mma site n'ịgbakwụnye njirimara nke njirimara.
Atụmatụ na-elekọta nwa apricot iche "Black velvet"
Ihe dị iche na-adịghị emepụta ndị ọkpụkpụ iji maa ndị mmadụ anya na ihe ha rụzuru. Dịka ọmụmaatụ, mụ na gị maara ụdị apricots na-acha odo odo, ma ọ na-egosi na nke a dị anya site na ngbanwe ha naanị. Ya mere, anyị na-elebara anya na apricot "Black velvet", nkọwa nke ọ ga-ejide gị anya.
Black apricot: kụrụ na ilekọta "Kuban black"
Ma ndi nmalite na ndi oru ugbo ndi nwere ahuhu nwere ochicho ochicho ime ihe puru iche n'ubi ha. Enwere ike iwere ya dika apricot apiri, nke nwere aha ya n'ihi agba ocha nke nkpuru. Akwukwo apricot "Black Kuban": nkowa Tupu i kpebie igbasa akwukwo apricot di iche iche "nwa kpoan", i kwesiri imuta ihe omuma ya iji mata ihe ndi kwesiri ka hazie maka ihe akuku a, otua esi echebara ya anya na ihe ichikota.